Imizuzu ukuya kwiDoolin, iiMbono zoLwandle, iBucala eliQhelekileyo. - I-Airbnb
Imizuzu ukuya kwiDoolin, iiMbono zoLwandle, iBucala eliQhelekileyo.
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguKate
Isitudiyo sethu sibonelela ngobumfihlo obugqwesileyo, ukuba wedwa kunye neembono ze-Arans; amathambeka kunye namadlelo The Burren. Kufuphi neCliffs, ii-pubs zesintu, umculo kunye nokutya okuhle. Indawo efanelekileyo yokujonga unxweme lwaseIreland.
Ngaphezulu kwamakhulu amathathu anesihlanu ophononongo lweenkwenkwezi, abaninzi besithi le yeyona Airbnb bayithandayo eIreland!
Igumbi elilula neliphangaleleyo elinebhedi ekhululekileyo ephindwe kabini, ishawa yombane eneshawari eshushu engasikelwanga mda, isomisi seenwele, kunye nezinto zangasese ezibalulekileyo.
Kukho ifriji, i-microwave, kunye neketile.
Iipleyiti, izinto zokucheba, iiglasi, iikomityi, iisosa kunye nesixhobo sokuvula iwayini.
Ubisi olutsha, iti, ikofu, amashwamshwam aswiti nanetyuwa, kunye nebhiya ebandayo.
Kukho itafile enkulu yokubhala okanye yokuhlala ngelixa wonwabele ukutshona kwelanga okukhulu.
I-wifi elungileyo kunye neplagi yokutshaja ye-USB.
Ukuhlala apha kumalunga nendawo, imayile enye nje ukusuka kwi-Wild Atlantic Way phakathi kweDoolin kunye neLisdoonvarna., inika uxolo olugqibeleleyo lweBurren kunye neembono ezimangalisayo zeAtlantiki.
Kwaye umgama nje omfutshane (imizuzu eli-10) ukuya kuwonga iindawo zokutyela eziphumeleleyo, umculo odumileyo wehlabathi kunye nezona pubs zaseIreland zibalaseleyo emhlabeni.
Ifakwe kwi-Burren Way / Green Road, unokuchitha iintsuku zakho ujonga intlango, intlango engagungqiyo le ndawo intle yehlabathi, nokufikelela kwangoko kwiihambo, ukuhambahamba, izilwanyana zasendle kunye nomoya wasekhaya ezinyaweni zakho.
4.93 · Izimvo eziyi-433
Iimayile nje ezimbalwa ukuya eDoolin apho unokubamba isikhitshane ukuya kwiZiqithi ze-Aran, kwaye uqhube unyuke ngendlela emajiko-jiko ukuya kwiiCliffs zaseMoher. Kufuphi neMcGann's kunye ne-O'Connors kunye nazo zonke ii-pubs zemveli eDoolin.
Sikwakufuphi neLisdoonvarna yembali apho uya kufumana i-Roadside Tavern kunye ne-Ritz.
Kuhlala kulungele iindwendwe ukuba zingene kwi-cottage, ukuba sikude nendlu ngexesha lokufika kwakho. Kwimeko apho, istudiyo sishiywe sivulekile kwaye isitshixo sisetafileni.
Ukuba kukho izibane endlini, ndicela ubethe intsimbi kwaye ubulise xa ufika.
Umkhomba-ndlela okwisiza sika-Airbnb uchanekile kwaye kulula ukuwulandela. Umkhomba-ndlela wakho weGPS usenokungathembeki emva kokuba udlule ehotele ngoko ke nceda unikele ingqalelo kwiindlela ezibhaliweyo.
Indawo entle njengoko usondela kwihotele yaseBallinalacken Castle esuka eLisdoonvarna iyamangalisa.
Kungcono ukufika okokuqala ngaphambi kokuba kube mnyama. Indlela eluhlaza/iBurren Way yindlela emxinwa, yasemaphandleni eba mnyama kakhulu emva kokutshona kwelanga. Ukuba ufika emva kwexesha kungcono uze nokutya kwakho kwangokuhlwa nakusasa kunye nawe. Uya kuqhuba udlula kwaye umke kwiidolophu ezikufutshane ukuze ufike kuthi.
I-studio iya kufakwa kunye nokutya okumnandi kunye netyuwa, ibhiya ebandayo kunye nobisi lwekofu / iti.